TeslaCoin စျေး - အွန်လိုင်း TES ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TeslaCoin (TES)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TeslaCoin (TES) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TeslaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $186 714.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TeslaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TeslaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TeslaCoinTES သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0118TeslaCoinTES သို့ ယူရိုEUR€0.00997TeslaCoinTES သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00898TeslaCoinTES သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0107TeslaCoinTES သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.105TeslaCoinTES သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0742TeslaCoinTES သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.26TeslaCoinTES သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0439TeslaCoinTES သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0156TeslaCoinTES သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0165TeslaCoinTES သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.26TeslaCoinTES သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0913TeslaCoinTES သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0634TeslaCoinTES သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.882TeslaCoinTES သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.99TeslaCoinTES သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0162TeslaCoinTES သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.018TeslaCoinTES သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.367TeslaCoinTES သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0819TeslaCoinTES သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.26TeslaCoinTES သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩13.98TeslaCoinTES သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.55TeslaCoinTES သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.862TeslaCoinTES သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.322
TeslaCoinTES သို့ BitcoinBTC0.000001 TeslaCoinTES သို့ EthereumETH0.00003 TeslaCoinTES သို့ LitecoinLTC0.000217 TeslaCoinTES သို့ DigitalCashDASH0.00013 TeslaCoinTES သို့ MoneroXMR0.000132 TeslaCoinTES သို့ NxtNXT0.919 TeslaCoinTES သို့ Ethereum ClassicETC0.00174 TeslaCoinTES သို့ DogecoinDOGE3.4 TeslaCoinTES သို့ ZCashZEC0.000143 TeslaCoinTES သို့ BitsharesBTS0.363 TeslaCoinTES သို့ DigiByteDGB0.377 TeslaCoinTES သို့ RippleXRP0.0418 TeslaCoinTES သို့ BitcoinDarkBTCD0.000406 TeslaCoinTES သို့ PeerCoinPPC0.0391 TeslaCoinTES သို့ CraigsCoinCRAIG5.37 TeslaCoinTES သို့ BitstakeXBS0.502 TeslaCoinTES သို့ PayCoinXPY0.206 TeslaCoinTES သို့ ProsperCoinPRC1.48 TeslaCoinTES သို့ YbCoinYBC0.000006 TeslaCoinTES သို့ DarkKushDANK3.78 TeslaCoinTES သို့ GiveCoinGIVE25.52 TeslaCoinTES သို့ KoboCoinKOBO2.68 TeslaCoinTES သို့ DarkTokenDT0.0109 TeslaCoinTES သို့ CETUS CoinCETI34.03
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:20:02 +0000.